चीन निर्दोष तेल मुक्त मैट तरल फाउन्डेसन पूर्ण कभरेज २० मि.लि. लामो चिरस्थायी मेकअप फाउन्डेशन SPF15 कारखाना र निर्मातासँग। जिनफुया
बस्तु संख्या J203
बनावट म्याट समाप्त, पूर्ण कभरेज, चिकनी, लामो समयदेखि, वाटरप्रूफ, निर्दोष समाप्त। हल्का तौल, तेल मुक्त सूत्र SP SPF15 को साथ
सुहाउदो 40० भन्दा बढी शेडहरू प्रायः सबै छालाको टोनसँग मिल्दछन्
नेट सामग्री ०..68 fl ओज (२० मिलि)
समारोह असमान छाला बनावट पुनर्स्थापित गर्दछ, तरल सूत्र सबै छाला प्रकारका लागि उत्तम
निर्दोष समाप्त फाउन्डेशन तपाईंको उत्तम अनुहार अगाडि राख्नको लागि गोप्य हतियार हो। पूर्ण कभरेज फाउन्डेशनहरूको पवित्र ग्रिल, यो क्रीमयुक्त तरल सूत्र छालामा सपना जस्तो ग्लाइड हुन्छ - जुन तपाईको हृदयको इच्छा हेर्दछ को लागी चरण स्थापना गर्दछ। शीर कभरेजको लागि, आफ्नो दैनिक मॉइस्चराइजरसँग मिक्स गर्नुहोस्। ओसको चमकको लागि, चिम्मेरी अनुहारको मोइश्चराइजरसँग मिक्स गर्नुहोस्। न्यूनतम दृष्टिकोणको लागि लाइट पाउडर अनुप्रयोगको साथ सेट गर्नुहोस्, वा रातो ओठहरू र कालो eyeliner को साथ पूर्ण-माग्मलिस्टलिस्टहरूको साथ बोल्ड गर्नुहोस्।
हाम्रो फाउण्डेशनले सबै अनुहारमा सुन्दरताको सर्वश्रेष्ठ पहुँच पुर्‍याउँछ। तपाईंको मौलिकता असीम छ, र हामी तपाईंलाई प्रेरणा गर्छौं तपाईंलाई अद्वितीय बनाउँछ। प्रारम्भिक अन्वेषकबाट ट्रेन्ड-ओब्सडेड सुन्दरता जंकी-ग्लम वा बेअर फेस, मिनिमलिस्ट, अधिकतमवादी र बीचमा रहेको हरेक हेराई हामी प्रत्येक आँखा, ओठ, र अनुहारका लागि छौं। गर्व १००% शाकाहारी र क्रूरता रहित, विश्वव्यापी रूपमा।
हामी यो जगलाई किन माया गर्छौं पत्ता लगाउनुहोस्:
१. हल्का वजन, पूर्ण कभरेज, तेल मुक्त सूत्र प्राकृतिक रूपमा छालामा मिश्रण गर्दछ सुन्दर सेमी-म्याट फिनिशका लागि जुन दिनभर चलिरहन्छ।
२. तरल सूत्रले उज्ज्वल छालाको लागि असमान छाला बनावट र टोनहरू पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ।एसपीएफ १ 15 प्रदान गर्दछ घामको क्षतिबाट तपाईंको छालालाई बचाउन।
C. क्रूरति-रहित, शाकाहारी र १००% Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, र Hydroquinone बाट निःशुल्क।
अघिल्लो: पूर्ण कभरेज तरल कन्सीलर ml मिलि म्याट समाप्त १ high घण्टा लामो गुणवत्ता मेकअप कन्सीलर उच्च गुणवत्ताको साथ
अर्को: थोक सिल्की लिक्विड फाउन्डेशन colors रंग रight्गीन ml० मि.मि. प्राकृतिक क्रीमयुक्त बनावट र मोइस्चराइजिंग फार्मूलाको साथ
तरल फाउन्डेशन मेकअप
तरल मेकअप आधारशिला
मेकअप लिक्विड फाउन्डेशन
मेकअप मैट फाउन्डेशन
पूर्ण कभरेज तरल कन्सीलर 6ML मैट समाप्त ...
खाली लिप ग्लोस मॉइश्चराइजिंग भेगन लिप केयर मक ...
कस्टम लोगो म्याट लिपग्लोस लामो समयसम्म चल्ने col० कोलो ...
निजी लेबल मेटलिक शिमर लिप्गलोस भेगन सी ...
निजी लेबल मेकअप ब्लश वाटरप्रूफ नरम खानी ...